स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) को १०औं साधारणसभाबाट महासचिव पदमा राजु निरौला निर्वाचित भएका छन्। शैक्षिक परामर्शको क्षेत्र लामो समयको अनुभव र संयोजनकारी भूमिकाका लागि निरौला परिचित छन्। फेकनमा नयाँ नेतृत्वका चुनौती र आगामी रणनीतिका सन्दर्भमा नवनिर्वाचित महासचिव निरौलासँग गरिएको संवादः
फेकनको १०औं साधारणसभाबाट नयाँ नेतृत्व चुनियो। मिश्रित नतिजा आयो। मतदाताबाट सबैलाई मिलेर जानु भन्ने सन्देश आएको हो?
–वास्तवमै स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) का सबै साथीहरूबीच एकता र सहकार्यको सन्देश मतदाताहरूबाट प्राप्त भएको छ। फेकनलाई सशक्त संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न पनि सहकार्यको विकल्प छैन। सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। संस्था र संगठनलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश हामीले पाएका छौं।
महासचिवजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभयो। संस्थाको हितका लागि संस्थालाई नवीन ढंगले अघि बढाउन अब कस्तो रणनीतिका साथ अघि बढ्नुहुन्छ?
–हामीले हाम्रो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छौं। दुई वटै घोषणापत्रको साझा मर्म र भावनालाई एउटा कार्यक्रमको रुपमा अघि बढाउँछौं। सर्वप्रथम हामी संगठन विस्तारका लागि अगाडि बढ्ने छौं। गण्डकी प्रदेशमा फेकनको संगठन विस्तार गरिएको छ। अब अरु प्रदेशमा विस्तार गर्ने तयारीमा लाग्ने छौं। फेकनको कार्यालय व्यवस्थापनका कुराहरू छन्। कर्मचारी थपेर र अन्य आवश्यक कुराको प्रबन्ध गरेर कार्यालयलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने योजनामा छौं। हामीले आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नका लागि बर्कआउट गर्छौं। जसले संथालाई दरो र बलियो बनाउँछ। संस्थाका सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम, गोष्ठीहरूको आयोजना गर्छौं। साथै कोरोना महामारीबाट उत्पन्न समस्याको समाधान र व्यवस्थापन एवं संकटमा रहेका व्यवसायीलाई कसरी अगाडि बढाउने विषयमा कार्यसमितिको बैठकपछि तय गर्छौं।
संस्थाको श्रीवृद्धिका लागि। संस्थालाई दीर्घकालीन रुपमा शसक्त संस्था र सबैको साझा संस्था बनाउनका लागि विशेषगरी शैक्षिक परामर्श व्यवसायी, विद्यार्थी र अभिभावकहरुको लागि आगामी दिनमा कस्ता नवीनतम कार्यक्रमहरु ल्याउनु हुनेछ?
–हामीसँगै उहाँहरुले पनि घोषणापत्र जारी गर्नुभएको थियो। हाम्रो प्रथम बैठकमा उहाँहरु र हाम्रा साझा एजेण्डाहरु छन् त्यसमा छलफल हुन्छ। हामीले विद्र्याी कल्याणकारी कोष निर्माण गर्ने, फेकन एप बनाउने सोचेका छौं। यीनै कुराहरु लिएर हामी अभिभावक र विद्यार्थीमाझ जानेछौं। हामीले आवश्यक सन्देशहरु प्रवाह गर्दै अगाडि बढ्छौं।
साधारणसभामार्फत् नेतृत्व चयन गर्ने क्रममा पराजित भएका अन्य प्रतिस्पर्धीहरूलाई मिलाएर लाने योजना के छ? कसरी समेट्नु हुन्छ?
–हामी निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिनु भएका सबै साथीहरूसँग छलफल र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्छौं। उहाँहरू सबैसँग मिलेर अघि बढ्छौं। हामी छुटेरभन्दा पनि जुटेर अझ सशक्त भएर नवीनतम् योजनासहित अघि बढ्छौं। संस्था ठूलो हुँदै गइरहेको छ। यसलाई कसरी बृहत् बनाउने भनेर हामीले सोचिरहेका छौं। यस्तो चुनौती र अवसरयुक्त समयमा कोही पनि छुट्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। फेकनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जुन उचाइ बनाएको छ, त्यसलाई अझै माथि लानका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ। नयाँ नेतृत्वको कार्यकाल २ वर्षको हो। २ वर्षपछि नेतृत्व फेरिने छ। प्रतिस्पर्धी साथीहरूले आफूमा भएका कमी कमजोरीहरू सुधारेर आगामी दिनमा सशक्त र प्रभावकारी नेतृत्वको रुपमा उदाउनु हुने छ।
स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) लाई प्रदेशमा र जिल्ला–जिल्ला सक्रिय व्यवसायीहरूको साझा संस्थाको रुपमा कसरी अघि बढाउनु हुन्छ?
–हामी प्रदेश संरचनामा गइसकेका छौं। प्रदेशमा छिट्टै विस्तार गर्छौं। जिल्लाका लागि प्रदेशबाट काम हुन्छ। प्रदेशमा रहेका साथीहरूले समन्यवकारी भूमिका निर्वाह गरेर जिल्लालाई पनि हेर्नुहुन्छ। त्यसमा केन्द्रबाट गर्नुपर्ने सहयोग समन्वयमा हाम्रो विशेष ध्यान हुने छ। सदस्यहरूले प्रश्न गरेअनुसार विधान संशोधनका लागि सहजीकरण भूमिका खेल्ने छौं। फेकनलाई शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा प्रभावकारी संस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने छौं। फेकनलाई नवीनतम् शैलीमा अघि बढाउन दुवै घोषणापत्रका योजना कार्यान्वयन गर्छौं।
#महासचिव #स्वतन्त्र_शैक्षिक_परामर्श_संघ_नेपाल #फेकन #राजु_निरौला